Inwere ike ịgbazite Mac mini M1 ọtụtụ awa n'igwe ojii | Esi m mac
Can nwere ike ịgbazite Mac mini M1 ugbu a na igwe ojii
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale onwe gị nke ọma Apple Silicon kọmputa ndị ọzọ na - arụ ọrụ, ugbu a ị nwere ike ịgbaziri agbaziri a Mac mini na igwe ojii igwe ojii M1, na ọnụahịa dị oke ọnụ. Ọ dị ka nzuzu mana ọ bụghị.
Anyị nọ n'oge ọrịa na-efe efe, ọrụ telivishọn abụrụla ihe achọrọ maka ụfọdụ ngalaba, gụnyere nke ndị mmepe ngwa. Ma ị bụ onye mmepe na - enweghị akwụkwọ na - arụ ọrụ naanị gị, ma ọ bụ na ị nọ n’otu nnukwu ụlọ ọrụ ma na - arụ ọrụ n’ụlọ, ịgbazite Apple Silicon maka ịnwale ntụpọ na - edozi gị nsogbu, ma anaghịkwa amanye gị zụta gị Mac ọhụrụ iji nwalee ngwa gị na ihe nhazi M1.
Nweta Mac mini na igwe ojii ahụ enweworị ọ ga-ekwe omume kemgbe njedebe nke afọ gara aga. Ọrụ Weebụ Amazon (AWS) malitere inye ohere ịnweta otu Mac mini (Intel) n'otu Euro kwa elekere, na nchịkọta elekere 24. Akpaka, a European ojii ọrụ ụlọ ọrụ, ugbu a na-enye M1 processor version nke Mac mini site 0,10 € kwa awa, jiri otu ngwugwu oge elekere 24.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ọrụ gbakwasara tumadi ka ndi otu mmepe Ngwa iOS na macOS. Ọ bara uru karịa iji usoro a maka nyocha ndị otu na Apple Silicon gburugburu karịa ịzụta ihe ọhụrụ maka ndị mmepe niile na-arụ ọrụ ahụ, yana karịa ma ọ bụrụ na ha na-ekwupụta n'ụlọ.
Site nkwekọrịta ọrụ ahụ, ị ​​nwere ohere maka awa 24 site na kọmputa gị gaa na Mac mini M1 na ụdị kachasị ọhụrụ nke macOS Nnukwu Sur na Xcode. Ọ bụ ụzọ dị mma iji mee nnwale akọwapụtara nke ọrụ na mmepe na Apple Silicon.
Akpaka arụnyere Mac mini M1 ọhụrụ ya na ụlọ ọrụ data DC4 a-art mara mma nọ na mbụ mgbada mbibi nuklia 25 mita n'okpuruala na Paris, France. Malite taa, ndị ahịa Scaleway nwere ike irite uru na Mac mini M1 site na ebe ọ bụla n'ụwa, maka elekere 10 n'otu elekere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Mac Obere » Can nwere ike ịgbazite Mac mini M1 ugbu a na igwe ojii
Ihe mbụ beta nke macOS 11.3 adịlarị n’aka ndị mmepe
Billie Eilish nwere ụlọ ọrụ gọọmentị maka akwụkwọ akụkọ Apple TV +